Internet Watch Foundation - The Foundation Foundation
Blog Internet Watch Foundation
adminaccount888 23rd May 2019 News Latest
Toddobaadkan guddiga Internet Watch Foundation Susie Hargreaves OBE ayaa ka hadlayay Haweenka Saacadda on Radio 4. Wareysigan kooban ee Jane Garvey wuxuu ku siinayaa sawir aad u cad oo ku saabsan shaqada muhiimka ah ee ay qabtaan.
Susie Hargreaves oo la hadlaya Jane Garvey haweenka Saacadda
Internet Watch Foundation waa mid ka mid ah ciyaartoyda muhiimka ah ee yareynaya waxyeelada filimada. Waxay yihiin dadka yareeya helitaanka waxyaabaha la xariira galmada ee internetka. Gaar ahaan waxay ka saaraan:
Waxyaabaha kufsiga ee galmoodka caruurta waxay qabteen meel kasta oo adduunka ah. IWF waxay isticmaashaa ereyga xadgudubka galmada ee caruurta si ay u muujiyaan cufnaanta sawirada iyo fiidiyowyada ay la macaamilaan. Qodobada asluubta ee carruurta, porno-xornimada caruurta iyo kalyaha caruurtu ma aha sharraxaad la aqbali karo. Ilmuhu ma ogolaan karo xadgudubkooda.
Sawirada aan sawir-qaadin ee ilmo-xatooyada galmada ee martigeliya UK.
Inta badan shaqadooda waxay diiradda saaraan ka saarista sawirada iyo sawiro fara xumeynta caruurta.
Hay'adda samafalka ee 'Internet Watch Foundation' waxay ka shaqaysaa caalamka inay internetka ka dhigto meel aamin ah. Waxay caawiyaan dhibbanayaasha xadgudubka galmada ee carruurta adduunka oo dhan iyagoo aqoonsanaya isla markaana ka qaadaya sawirrada internetka iyo fiidiyowga xadgudubka. IWF waxay raadisaa sawirrada muuqaallada xadgudubka galmada ee carruurta iyo fiidiyooyin waxayna siisaa meel ay dadwaynuhu ku soo sheegaan iyaga oo aan lagaran. Kadibna waa laga saaray. IWF waa urur aan faa iido doon ahayn. Waxaa taageeraya warshadaha caalamiga ah ee internetka iyo Guddiga Yurub.
Haddii aad dareen ka qabtid mid ka mid ah sawirada carruurta aad aragtid, fadlan u soo sheeg IWF https://report.iwf.org.uk/en. Tani waxay noqon kartaa mid si qarsoodi ah u shaqeyn karta.
Haddii aad rabto in aad dhageysato Hay'adda Abaalmarinta Abaalmarinta Reward ee Raadiyaha 4, Mary Sharpe waxaa u muuqday Abriil 2019. Dhageyso halkan.